RFID Wristband / Bracelet Suppliers uye Fekitori | China RFID Wristband / Bracelet Vagadziri
kupinda kudzora tikiti jira nfc wrist bhendi rfid machira chiitiko wristbands mutambo bracelet
RFID dzakarukwa machira, ane zita zvakare seRFID jira rewristband, rfid yechiitiko mawristband, rfid mutambo wristbands akasununguka uye anogara kwenguva refu, ayo akashongedzerwa neslider yeiyo imwe-saizi-inokodzera-ese kugona. Inogona kuve nguva imwe chete yekushandisa kana kudzokorodza kushandiswa kunoenderana nerudzi rwechizarira. Inoshandiswa zvakanyanya mumhemberero, zviitiko, makonati, mapato, misangano nezvimwewo edu eRFID machira emabhande emakumbo akakodzera kugona kwekutonga, manejimendi manejimendi, kubhadhara pasina mari, uye zvirongwa zvekushambadzira zvemagariro.
Isina mvura Inoraswa PVC rfid wristband
Mabhandi epachivande ePVC anoratidza kugadzikana kwakanyanya, isina mvura, inochinjika, uye inonzwa kugadzikana. Izvo zvinopihwa muvakuru, hudiki, uye saizi yemwana ane machipisi akasiyana. Ivo zvakare vanogona kuuya vakagadzirirwa neako logo, pamwe nesarudzo kubva kune imwe yedu yakawanda mavara ezvekupira. Yedu RFID anopfeka mawristbands akakodzera kune egore enhengo makirabhu, mwaka ekupasa nzvimbo, kana yakasarudzika / VIP makirabhu. Pamusoro pezvo, isu tinokwanisa kugadzirisa mawristband ane silika skrini yekudhinda, debossing, uye embossing.
rfid sililcone wristband inokodzera kumahombekombe, madziva, mapaki emvura, spas, gyms, makirabhu emitambo uye chero imwe nzira yeRFID yekudzora yekushandisa manyorerwo apo isina mvura nfc bracelet inodiwa. rfid silicone wristband ndeye IP68 isina mvura, yakasimba, eco hushamwari, kupisa kupisa, uye anti-allergy. Yedu yese rfid silicone nfc mawristband anowanikwa neLF 125khz, HF 13.56mhz, UHF 860-960mhz kana maviri frequency ICs. Inoshandiswa zvakanyanya pamusuwo wekupinda kudzora, manejimendi manejimendi, kuteedzera kubhadharisa, chipfuwo / chakarasika kuteedzera etc. Tsika wristband ruvara, tsika LOGO kudhinda zvese zviripo kune yedu RFID silicone wristband bracelet. Craft sarudzo senge yakasarudzika QR kodhi, serial nhamba, barcode, embossed, debossed, laser kudhinda nezvimwe zvese zvinogamuchirwa kuRFID silicone wristband bracelet.
RFID mabhandi echikwata anoratidza kugadzikana kwakanyanya, isina mvura, inoshanduka uye inonzwa kugadzikana. Izvo zvinopihwa muvakuru, hudiki, uye saizi yemwana ane machipisi akasiyana. Ivo zvakare vanogona kuuya vakagadzirirwa neako logo, pamwe nesarudzo kubva kune imwe yedu yakawanda mavara ezvekupira. Yedu maRFID wristbands akakodzera kune epagore mitezo yemakirabhu, mwaka wekupfuura nzvimbo, kana yakasarudzika / VIP makirabhu. Pamusoro pezvo, isu tinokwanisa kugadzirisa mawristband ane silika skrini yekudhinda, debossing, uye embossing.
Yakavharwa nfc zvishongo
Tambanudza Yakarukwa RFID nfc wristband zvakare inonzi seyakagadziriswa rakarukwa RFID wristband rakagadzirwa ne-yakasununguka-yakasununguka, 100% polyester zvinhu uye anotambanudza izvo zvinogona kugadzirisa kune saizi saizi. RFID yakatambanudza wristband inogadziriswa saizi, inobviswa, inoshandiswa zvakare, uye mvura-chiratidzo. Yakanaka kwazvo kune akawanda-mazuva ekushandisa kana mwaka ekupasa zvirongwa.
Inogona kuraswa Tyvek RFID Wristbands
RFID bepa rewristband rinogona kuva humbowo hwemvura, rakasimba uye rakaomarara zvakanyanya. RFID mapepa emabhanhire emabhandi mhinduro yakachipa uye yakachengeteka yewristband, yakakwana kune zviitiko zvinoda nzira yekutanga asi yakachengeteka yekuzivikanwa kwemhando dzakasiyana dzevaenzi. RFID mapepa mawristband anowanzo shandiswa mumanightclub, mabara uye mapato.